प्रकाशमानको प्रश्न : काठमाडौंमा जन्मिएको र गणेशमानको छोरा भन्दैमा म सभापति बन्न नपाउने ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशमानको प्रश्न : काठमाडौंमा जन्मिएको र गणेशमानको छोरा भन्दैमा म सभापति बन्न नपाउने ?
प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०७८, शनिबार १ : १५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले १४औं महाधिवेशनबाट आफूलाई सभपाति जिताउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौं महानगरको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले उपत्यकाबासीले बाहिरबाट आएका नेताहरुलाई मात्र अघि बढाएको भन्दै दुखेसो पोखे ।